သင်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | Mycanvas
တစ်ခါတစ်လေ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာမှလုပ်ချင်ကိုင်ချင်တဲ့စိတ်မှမရှိတော့တဲ့အခါတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေရင်တော့ ပုံတစ်ပုံချင်းကိုနှိပ်ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါနော်…
အကြောင်းအရင်း (၁) – သင်ဟာမလုပ်နိုင်မှာကိုကြောက်နေတယ်
ဖြေရှင်းချက် – ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုအာရုံစိုက်ပါ
သင်ဟာအမှားလုပ်မိမှာကိုကြောက်ပြီး ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာကို ရပ်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ အခုပြောမယ့်ဖြေရှင်းချက်က အသင့်တော်ဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုတာက သင်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ခေါင်းရှောင်လိုက်ရင် သင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အရာတွေကို သင်ကြိုတင်စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင်တော့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်နဲ့ ပြောထားပြီးသား Project တစ်ခုကို သင် Deadline မမှီပဲ လွဲချော်ခဲ့ရင် သင့်အတွက်ဘာတွေဆုံးရှုံးနိုင်သလဲ? သင်ဟာ အရှုံးကို‌ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်တောင် သင့်ကိုယ်သင်စိတ်ပျက်အားလျော့မှုကိုဖြစ်စေပြီး သင့်အလုပ်ကိုတောင်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သင့်အထက်လူကြီးတွေ၊ အလုပ်အတူလုပ်တဲ့သူတွေဆီကနေ ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့ ဆက်ပြီးကြိုးစားတာနဲ့မှာ သင့်အတွက်ဘယ်အရာက ပိုပြီးအကျိုးရှိစေသလဲ? စဉ်းစားကြည့်ပါ..သင်ဘာမှမကြိုးစားပဲအရှုံးပေးလိုက်ရင်တော့ သင့်အတွက်ဆုံးရှုံးစရာတွေပဲဖြစ်လာစေမှာပါ…
အကြောင်းအရာ (၂) – စိတ်မပါဘူး၊ သင့်မှာလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး
ဖြေရှင်းချက် – သင့်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Feeling တွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။
တစ်ခုခုကို စမလုပ်ပဲနဲ့ လုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့အချိန်ထိစောင့်နေရမယ်လို့ မင်းကိုဘယ်သူပြောလဲ?” လို့ Oliver Burkeman ဆိုသူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တစ်ယောက်ယောက်က “ငါမနက်အစောကြီးတွေအိပ်ရာမထနိုင်ဘူး” လို့ပြောတယ်ဆိုပါစို့၊ ဘာလို့လဲ? ဘယ်သူကမထနဲ့လို့တားလို့လဲ? ဘယ်သူမှတော့ မတားလောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်။ ပြောချင်တာက အဲ့ဒါဟာ မထချင်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုက အရာတစ်ခုခုကို လုပ်ချင်စိတ်ရှိလာတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကျမှထလုပ်တာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအတွက် လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတွေးပြီး လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်စောင့်နေစရာမလိုပါဘူး။ Burkeman ရဲ့ အဆိုအရ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများစုဟာ သူတို့လုပ်ချင်စိတ်မရှိရင်၊ လုပ်ရတာတွေကပျင်းစရာကောင်းနေရင်တောင် သူတို့လုပ်စရာရှိတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကြောင်းအရင်း (၃) – သင်ပျင်းနေလို့၊ သင့်အတွက်ခက်ခဲနေလို့၊ အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့
ဖြေရှင်းချက် – “If then(ဒါပြီးရင်)”ဆိုတဲ့ Plan ကို စမ်းကြည့်ပါ
“ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်လို့ပြီးရင် Client တွေကို ဖုန်းခေါ်မယ်”၊ “ညနေ ၃ရာရီကျရင် Project အသစ်အတွက် Proposal ရေးမယ်”
ဒီလို “If then” Plan တွေကိုသုံးပြီး Schedule တွေကို ကြိုတင်လုပ်ထားခြင်းက သင့်အလုပ်ကို ထိရောက်စွာပြီးမြောက်စေဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှု ၂၀၀ကျော်အရ “If then” plan ကို အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ လူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွေဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀၀% ကနေ ၃၀၀% အထိတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ “If then” plan ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအင်ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့စိတ်စွမ်းအင်ဆိုတာဟာလည်း အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တိုတွေဟာ နေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေထက်စာရင် ပိုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရမှသာ ထုတ်သုံးသင့်ပါတယ်။
How to Make Yourself Work When You Just Don’t Want To (Harvard Business Review)